Ziziphi iindlela ezisebenzayo zokwenza izikhundla zokunqoba nokunyusa ukuthengisa kwemveliso?
Ukuba ukhangele ukungena kwiimakethi entsha okanye ukwandisa ishishini lakho, iplani yokubuyisela umhlaba jikelele ye-Amazon yithuba elihle kuwe kunye neenjongo zoshishino lakho. Ukuba udibanisa nge-niche apho ungathanda ukuqala ishishini lakho okanye unayo ibhajethi eyaneleyo ukudala indawo yakho ye-ecommerce, i-Amazon.com ngokuqinisekileyo okufunekayo. I-Amazon yiyona kuphela yesikhulumi se-e-yorhwebo kwihlabathi elibonelela ngobuncwane obunengqiqo okhuphisanayo. Kwaye inxalenye engcono kakhulu kukuba unokuyifumana kwixabiso eliphantsi okanye nakwihhala.
Kule nqaku, siza kuxubusha indlela yokuphatha kakuhle ii-Amazon kunye nokufunda ngokuchanekileyo ukuba imarike yakho ifuna ntoni. Uya kufumana amacebiso aluncedo ekufumaneni ngayo abaqhubi bakho beemakethe eziphezulu kunye nokuwahambisa. Siyathemba ukuba iingcebiso zethu ziyakunceda ukuba uphumelele kwi-Amazon kwaye wenze ichishini lakho liphumelele. Ngoko makhe singene kuwo!
Indlela yokujonga i-niche yemakethe apho ungathanda ukuphuhlisa ishishini lakho ukujonga uluhlu oluthengisa kakhulu abathengisa ama-Amazon. Ukuba sele ukhe ukhethe i-niche yakho, ungasebenzisa ulwazi oluthengisa kakhulu ukuthengisa ukuba yeyiphi imveliso enokubhenela kwikharityhulam yakho ekujoliswe kuyo kwaye ivelise inani elikhulu lokuthengisa kwi-Amazon. Ukuqakraza kwento, unokubheka apho ihamba khona malunga nokuthengisa kunye nendlela abasebenzisi abayihlolisayo ngayo. Ukuze ufumane okunye okungafaniyo, unokwazi ukujonga kwiiklasi zecala kwicala lasekhohlo lephepha. Amagqabantshintshana angakunika ulwazi oluthe xaxa malunga neemakethe ezikhethiweyo kwaye ucinge ngokunciphisa i-market target target. Kungenzeka ukuba akukho nxalenye engaphantsi kwesigaba sakho, kodwa kunokwenzeka ukuba kukho..Ukuba akunjalo, qwa lasela iindidi ezinxulumene nazo njengokuba nazo zinokukunika ingcamango efanelekileyo yezoshishino.
Ukuchonga i-TOP niche ukuncintisana
Ngokujonga ngezona zinto zithengisa kakhulu, unokwazi ukuchonga izicwangciso zakho zokuncintisana. Unokufumana ezi nkcukacha kwiGoogle kwaye ukhangele iminikelo yazo yemveliso. Ngaphezu koko, unako ukuthenga ivenkile kwaye uthenge iimveliso zazo ukujonga ubunjani beenkonzo zabo zokuxhaswa kwamakhasimende kunye nexesha lokuhambisa. Ukongezelela, khangela ukuba ngabaqhubi bakho be-niche bathetha ntoni kwi-Amazon malunga ne-funnel upsells kunye ne-downsells.
Khetha iimveliso ezifanelekileyo ukuthengisa kwimarike yakho
I-Amazon inokukunceda ukuba unqume oko iimveliso ofuna ukuzithengisa kuyo. Le ngcaciso ungayifumana kwikhasi leemveliso elithengisa kakhulu. Unokufumana iimveliso ezinxulumene nomgangatho ophezulu kunye nentengo ephantsi. Ngokwenza njalo, uya kukhupha umncintiswano wakho kwaye uphucule intengiso ye-Amazon.
Fumana upsells high-high
Ukuphanda i-Amazon, unokufumanisa ukuba yiyiphi upsell oyifanele ukuyisebenzisa kwi-funnel yakho yokuthengisa. Unokuthembela ngokupheleleyo kule nqonga njengoko yenza iimvavanyo ezininzi kunye nophando ngaphambi kokubonelela ngabasebenzisi naliphi na iziphumo. Ngoko, jonga kwikhasi elithengisa kakhulu lemveliso oyifunayo uze uklikha kwizinto ezithengiwe kakhulu kwiluhlu. Khangela phantsi kwefayile yesithombe kumacandelo amathathu alandelayo, kwaye uya kugcina "ukuthengwa rhoqo" kwicandelo, "abathengi abathengile le nto bathengi" kunye ne "imveliso exhaswe ngokumalunga nale nto". Ukuvavanya ezi ngxenye, uya kufumana ulwazi olukhuphisana nolwazi lokukhuphisana Source .